Global Voices teny Malagasy » Olana Miozolomana ve io? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Novambra 2017 6:22 GMT 1	 · Mpanoratra Ahmed Al-Omran Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Amerika Avaratra, Angletera, Etazonia, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana
Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jolay 2005
Taorian'ireo fipoahana tao Londra, nilaza i Jeff Jarvis  fa tsy azony antoka hoe raha tena miatrika mivantana tokoa ny olana mikasika ny fampihorohoroana ry zareo Tandrefana. Na izany aza, mieritreritra izy fa nataon'i Tom Friedman  nazava tsara kokoa izany raha nilaza izy hoe: “olana Miozolomana io, mila vahaolana iray Miozolomana.” Humoud Abu-Talib, mpanoratra ho an'ny gazety mpiseho isanandro “Al-Watan”, nitanisa ireto teny ireto ho an'i Friedman:
Na, ny tontolo miozolomana manomboka tena manery, manakana ary manohitra ireo mpampihoroho avy ao aminy- raha toa voaporofo fa izy ireo no tao ambadik'ireny fandarohana baomba tao Londra ireny – na, ny Tandrefana no hisolo toerana azy ireo hanao izany. Ary hataon'ny Tandrefana amin'ny fomba tena henjana sy mavesatra izany – amin'ny alalan'ny fanidiana azy ireo fotsiny, amin'ny alalan'ny tsy fanomezana azy ireo ny fahazoan-dalana mivahiny ary fanaovana ny Miozolomana tsirairay ao aminy ho tomponandraikitra mandra-panaporofoana ny tsy fananany tsiny.
Nanoratra i Abu-Talib hoe: “mampalahelo ny nilazan'i Friedman hoe ‘tomponandraikitra ny Miozolomana tsirairay mandra-panaporofoana ny tsy fananany tsiny’, ary sahala amin'ny toa izay no efa mitranga”. Manameloka ireo Britanika tomponandraikitra ihany koa izy noho ny famindràna fo atao amin'ireo mahery fihetsika. Naneho hevitra mitovy amin'io ihany koa i Abdul Rahman al-Rashed . “Tsy vitan'ny hoe afaka miditra malalaka ao amin'ny firenena fotsiny izy ireo, fa mbola mahazo ihany koa, trano fonenana, karama isambolana, ary torohevitra araka ny lalàna ho an'ireo izay nanana faniriana hanenjika ny governemanta Britanika, ” hoy izy nanoratra ho an'ny ampahany amin'ny fiteny Angilisy ao amin'ny Asharq al-Awsat .
Heverin'i Abu-Talib fa izay nitranga dia hanokatra ny vavahadin'ny helo ho an'ireo Miozolomana, indrindra fa ireo Arabo Miozolomana. “Handoa ny sandan'ny hadalàn'ireo foka manatanteraka heloka bevava amin'ny anaran'ny Silamo, ireo Miozolomana ao Eoropa.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/24/110462/
 Jeff Jarvis: http://buzzmachine.com/archives/2005_07_08.html#23010018
 Tom Friedman: http://www.nytimes.com/2005/07/08/opinion/08friedman.html?ex=1278475200&en=97fef8736f2ac7d9&ei=5090&partner=rssuserland&emc=rss&pagewanted=all
 Abdul Rahman al-Rashed: https://mg.globalvoices.org http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=2&id=745
 ampahany amin'ny fiteny Angilisy ao amin'ny Asharq al-Awsat: https://mg.globalvoices.org http://www.aawsat.com/english/default.asp